ကလိမဟ်တော် (၅) ပုဒ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သီတဂူ ဆရာတော် ကို နှစ်ဖက် လု နေကြပုံ မြင်ရတာ ရယ်စရာ သိပ်ကောင်းတယ်
Press Briefing of US Rights Diplomat Tom Malinowski »
ကလိမဟ်တော် (၅) ပုဒ်
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတစ်ပါး အခြားခ၀ပ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်မရှိ။
မုဟမ္မဒ်သခင် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်းဟိဝစလ္လမ်)သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်ဖြစ်တော်မူ၏။
|| အသံထွက် ||
မြန်မာ –> လာအိလာဟ အိလ္လလ္လာဟု မုဟမ္မဒွရ် ရစူလွလ္လာဟ်
အင်္ဂလိပ် –> La ilaha ill Allah Muhammadur-Rasul Allah
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတစ်ပါး အခြားခ၀ပ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်မရှိကြောင်းကို ကျွန်တော်မျိုး သက်သေခံအပ်ပါသည်။
ထို့နောက် မုဟမ္မဒ်သခင် (ဆွလ္လလ္လာဟူ အလိုင်းဟိဝစလ္လမ်)သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဗန်ဒဟ် အစေတော်နှင့် တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သက်သေခံအပ်ပါသည်။
မြန်မာ –> အရ်ှဟဒု အလ္လာအိလားဟ အိလ္လလ္လာဟု ၀ဟ်ဒဟူ လာရှရီးကလဟူ ၀အရ်ှဟဒု အန္န မုဟမ္မဒန် အဗ္ဗဒူဟူ ၀ရစူးလု
အင်္ဂလိပ် –> Ash-hadu an-La illaha ill Allahu, Wahdahu La Sharika lah, wa ash-Hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasoolu
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူ၏။ ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်သာဖြစ်ကုန်၏။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှ တစ်ပါး အခြားခ၀ပ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်မရှိ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တော်မူ၏။
မကောင်းမှုများမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်စွမ်းနှင့် ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ကျင့်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သာ ရရှိနိုင်၏။
မြန်မာ –> စွဗ္ဗဟာနလ္လာဟိ ၀လ်ဟမ်ဒုလိလ္လားဟိ ၀လာအိလားဟ အိလ္လလ္လာဟု ၀လ္လာဟု အက္ကဗရ်၊ ၀လာဟောင်လ ၀လာကုဝသ အိလ္လာဗိလ္လာဟိလ် အလိယိလ် အဇွီးမ်
အင်္ဂလိပ် –> Subhan Allahu, wal Hamdu lillahi, wa la illaha ilAllahu, wallahu Akbar. wa La hawla wa la quwwata illa billah-al ‘alii-al ‘adheem
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတစ်ပါး အခြားခ၀ပ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်မရှိ။ ထိုအရှင်သည် တစ်ပါးတည်းတည်ရှိတော်မူ၏။ ထိုအရှင်နှင့် တုဖက်နှိုင်းယှဉ်ရန်မည်သူမျှမရှိ။
စိုးပိုင်ခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်အတွက်ဖြစ်ကုန်၏။ ၄င်းနောက် ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းသည်လည်း ထိုအရှင်အတွက်သာ ဖြစ်ကုန်၏။
ထိုအရှင်သည် ရှင်စေတော်မူ၏။ ၄င်းနောက် ထိုအရှင်သည် သေစေတော်မူ၏။
၄င်းနောက်ထိုအရှင်သည် ထာဝရရှင်သန်နေတော်မူပြီး မည်သည့်အခါမျှ သေဆုံးတော်မူမည်မဟုတ်ပေ။
ကောင်းချီးမင်္ဂလာအပေါင်းသည် ထိုအရှင်မြတ်၏ လက်ဝယ်၌ ရှိတော်မူ၏။
မြန်မာ –> လာအိလာဟ အိလ္လလ္လာဟု ၀ဟ်ဒဟူ လာရှရီးကလဟူ လဟွလ်မွလ်ကု ၀လဟွလ်ဟမ်ဒု ယိုဟ်ယီ ၀ယူမီးသု ၀ဟုဝ ဟိုင်ယိလ်လာမူးသု အဗဒန် အဗဒါ ဇွလ်ဂျလားလိဝလ်အိက္ကရားမ် ဘိယဒိဟိလ်ခိုင်းရ် ၀ဟုဝ အလာကွလ္လိ ရှိုင်းအင်န် ကဒီရ်း
အင်္ဂလိပ် –> La ilaha illAllahu Wahdahu La Shareeka lahu, lahulmulk, wa lahulhamd, yuhyee wa yumeet, wa huwa hayy la yumoot abadan abada Dhul Jalaali waal Ikram beyadihi alkhayr, wa huwa ‘ala kulli Shay’in Qadeer
အိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၊ ကျွန်တော်မျိုးသည် သိနားလည်လျက် တစ်စုံတစ်ရကို အရှင်မြတ်နှင့် တုဖက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးရန်၊ အရှင်မြတ်ထံခိုလှုံပါ၏။
ကျွန်တော်မျိုး မသိနားမလည်၍ ကျူးလွန်မိခဲ့သော အပြစ်များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် တောင်းခံပါ၏။
ကျွန်တော်မျိုးသည် ထိုပြစ်မှုမှ သောင်ဗဟ်ပြုအမှားဝန်ခံပါ၏။
၄င်းနောက်ကျွန်တော်မျိုးသည် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ တုဖက်နှိုးယှဉ် ကိုးကွယ်ခြင်း၊ မုသားပြောခြင်း၊ အတင်းပြောခြင်း၊ တရားသစ်တီထွင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကုန်းချောခြင်း၊ မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်းနှင့် ဒုစရိုက်အပေါင်းကို စွန့်လွှတ်ပါ၏။
ကျွန်တော်မျိုးလက်ခံယုံကြည်ပါ၏။ ၄င်းနောက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတစ်ပါး အခြားခ၀ပ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်မရှိကြောင်းနှင့် မုဟမ္မဒ်သခင် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်းဟိဝစလ္လမ်)သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို ဖွင့်ဟပြောဆိုပါသည်။
မြန်မာ –> အလ္လာဟွမ္မ အင်းန်နီ အအူးဇုဘိက မင်န်အန် အွရ်ှရိက ဘိကရှိုင်းအောင် ၀အန အအ်လမုဘိဟီ ၀က်စ်သဂ်ဖိရုက လီမာလာ အအ်လမုဘိဟီ သွတ်ဗ်သို့ အန်းန်ဟု ၀သဘရ်ရအ်သု မိနလ်ကုဖ်ရိ ၀က်ရ်ှရှိရ်ကိ ၀လ်ကိဇ်ဘိ ၀လ်ဂီးဘသိ ၀လ်ဗိဒ်အသိ ၀န်းန် နမီမသိ ၀လ်ဖ၀ါဟိရှိ ၀လ်ဘိုဟ်သားနိ ၀လ်မအာစီ ကွလ္လိဟာ ၀အက်စလမ်သု ၀အကူးလု လာအိလားဟ အိလ္လာဟူ မုဟမ္မဒွရ် ရစူလွလ္လာဟ်
အင်္ဂလိပ် –> Allahumma innii a’udhu bika min an ushrika bika shai-anw- wa ana a’lamu bihii. Was tagh fi ru ka limaa laa alamu bihee. Tubtu anhu wa tabarra-tu min al-kufri wash-shirki wal-kizdhbi wal-ghiibati wal-bid’ati wan-namiimati wal fawaahishi wal-buhtani w-al-ma’aasii kulliha. Wa aslamtu wa aquulu La illaha illAllahu Muhammadur RasulAllah
အာရဗီနှင့် မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုပြုစုသူ – အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ မုဖ်သီ နူးရ်မုဟမ္မဒ် From Maung Maung skw’s FB
This entry was posted on January 17, 2015 at 11:44 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.